मेरो जीवन : ‘अफकोर्स !’ रविनाको धेरैपटक लभ परेको छ - Ratopati
ब्यांकर तथा ‘मोटिभेसनल स्पिकर’ रविना देशराज श्रेष्ठ पछिल्लो समय सिनेमा क्षेत्रमा पनि संलग्न छिन् । अमेरिकाको एक विश्वविद्यालयबाट केही वर्षअघि ‘क्वालिफाइड हिलर’को प्रमाणपत्र पाउने सम्भवतः उनी पहिलो नेपाली महिला हुन् । विश्वका ६ हजार बढी महिलालाई उछिन्दै अन्तर्राष्ट्रिय गोल्डेन फिनिक्स अवार्ड र लेडी अफ एक्सिलेन्स अवार्डबाट सम्मानित रविना प्रभावशाली नेपाली महिलाका रूपमा चिनिन्छिन् । रविनाको प्रेम, मदिरा, संगीत, राजनीतिसहित रोचक प्रसंगमाथि रातोपाटीका लागि रमन पौडेलले गरेको कुराकानी :
सामान्यतः नेपाली खाना मन पर्छ मलाई । दाल, भात, तरकारी । यसबाहेक जापानी खाना पनि मन पर्छ । परिकारमध्ये अन्डाको पहेँलो भागचाहिँ मन पर्दैन ।
छोराहरूलाई लिएर रेष्टुरेन्ट पनि जान्छु । स्न्याक्सका रूपमा बदाम र सुकुटी असाध्यै मन पर्छ । धेरै परिकार बनाउन पनि जानेकी छु । समय मिलेसम्म घरमा म आफैँ पकाउँछु ।
मलाई प्रायः नीलो रंगको कपडा मन पर्छ । सामान्यतः ब्रान्डेड कपडा लगाउँछु । तर, कम्फोर्टेबल छ भने ननब्रान्डेड पनि लगाउने गर्छु ।
फिटनेसमा एकदमै ध्यान दिन्छु । हरेक दिन रिलिजियसली योगा गर्छु । ४५ मिनेटदेखि एक घन्टासम्म योगा गर्छु । खानामा पनि म ज्यादै होसियार हुन्छु । केही खाँदा पनि शरीरलाई हानि हुन्छ कि भन्ने ख्याल गर्छु । जे पायो त्यही खान्न ।
तीन/चारवटा पुस्तक एकैचोटि पढ्ने गर्छु । व्यवस्थापनदेखि साहित्यसम्म पढ्छु । लेखक म एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु । नयाँ लेखकका पुस्तक पनि पढेकी हुन्छ । म आफैँ पनि लेखिरहेकी छु । एउटा पुस्तक लेखिराखेको छु । मैले लेख्दै गरेको पुस्तक आफ्नै जीवन अनुभवमा आधारित छ ।
म अलिकति आध्यात्मिक पनि छु । त्यसैले आध्यात्मिक पुस्तक त पढ्छु नै । यसबाहेक क्वान्टम फिजिक्सबारे अध्ययन गर्न मन लाग्छ । यो मेरो रुचिको विषय हो । इनर्जी भन्ने चीज के हो । हिलिङ भनेको के हो भन्ने चीजबारे अध्ययन गर्न एकदम रुचि छ ।
तीन/चारवटा पुस्तक एकैचोटि पढ्ने गर्छु । व्यवस्थापनदेखि साहित्यसम्म पढ्छु । लेखक म एक्सप्लोर गर्न चाहन्छु । नयाँ लेखकका पुस्तक पनि पढेकी हुन्छ । म आफैँ पनि लेखिरहेकी छु । एउटा पुस्तक लेखिराखेको छु । मैले लेख्दै गरेको पुस्तक आफ्नै जीवन अनुभवमा आधारित छ । मानव जीवनको जीवनमा के भइराखेको छ । मान्छेलाई कस्ता कुराले प्रभाव पारेको हुन्छ । र, कसरी परिवर्तन हुन्छन् मान्छे । यस्ता विषय यसमा छन् ।
घुमफिर गर्न एकदमै मन लाग्छ मलाई । हाम्रो काम एकदमै स्टे«सफुल लङआवर्स हुने भएकाले पनि म घुम्न रुचाउँछु । समय–समयमा फ्रेस हुन काठमाडौँबाहिर गएर घुम्न मन लाग्छ ।
नेपालका धेरै ठाउँ घुमिसकेकी छु । यति नै भन्न सक्दिनँ तर धेरै जिल्ला घुमेकी छु । सगरमाथा बेसक्याम्पसहित अन्य हिमाली क्षेत्रमा जाने रहर छ । आशा छ, भविष्यमा त्यहाँ पनि पुग्छु ।
धेरै देश घुमिसकेकी छु । तर, अस्ट्रेलिया जान सकेको छैन । त्यसकै छेउको अर्को देश इन्डोनेसियाको बालीसम्म पुगेँ । मलाई समुद्रतीर घुम्न मन पर्छ । भाषा, खाना मिलेर होला सायद मलाई इन्डियाको मुम्बई एकदमै मन पर्छ । मुम्बईको भाइब्रेन्सी मन पर्छ ।
मलाई डिप अफ्रिकामा पुग्न असाध्यै मन लागेको छ । अहिले त काममा व्यस्त छु । समय मिल्यो भने त्यहाँ घुम्नका लागि मात्रै नभएर स्वयंसेवकका रूपमा काम गर्न मन छ । त्यहाँ अति नै गरिबी छ । त्यसैले पनि त्यहाँ गएर सहयोग गर्ने चाहना छ । त्यहाँका बालबालिकासँग मिलेर भोलेन्टियरिङ गर्न एकदम इच्छा छ ।
आफ्ना लागि म जे भए पनि समय निकालिराखेकी हुन्छु । र, यसरी समय निकाल्नु पनि पर्छ । फोन अफ गरेरै भए पनि आफ्ना लागि पर्सनल टाइम निकाल्नैपर्छ । धेरैजसो समय शनिवार भइराखेको हुन्छ ।
यस्तो समयमा म आराम गर्छु । ध्यान गर्छु । आफ्नो शरीरलाई हिल गर्नुपर्यो भने हिल गर्छु । पढेर, संगीत सुनेर फुर्सदको समय बिताउँछु ।
छोराहरूसँग एकछिन भए पनि सँगै बसेर कुरा गर्छु । उनीहरूलाई लिएर सिनेमा हेर्न र रेष्टुरेन्ट पनि जान्छु ।
खेलकुदमा पहिले रुचि थियो । तर, अहिले धेरैजसो काममै समय दिनुपर्ने हुन्छ । मलाई स्विमिङ गर्न मन लाग्छ । यसले शरीरको पूरा एक्सरसाइज हुन्छ । रिल्याक्सिङ पनि हुन्छ । समर आयो अब समय निकालेर स्विमिङ जान्छु ।
नेपालमा भएकामध्ये रग्बी खेल खासै मन पर्दैन । यो खेल अलि एग्रेसिभ लाग्छ । अरूलाई दुखाउनेखालका खेल मन पर्दैन ।
मसँग दुई मोबाइल छन् । सामसुङ एच–७ एच । यसको ब्रान्ड एम्बेसडर पनि थिएँ म । र, आईफोन–६ एस प्लस । मोबाइल फेर्न मन लाग्छ । बजारमा नयाँ आएपछि फेर्न मन लाग्छ । टेक्नोलोजीमा मलाई अपडेट हुन मन लाग्छ ।
यसअघि सामसुङको नोट–५ थियो । पछिल्लो मोबाइल पाएपछि त्यो मैले छोरालाई दिएँ । त्यो पनि एच नै थियो । तर, मलाई नोट सिरिज मन पर्छ ।
मसँग भएको सामसुङ एच–७ एच निकै मन परेको छ । किनकि यो वाटरप्रुफ पनि छ । यसमा हुने धेरैजसो एप्लिकेसन पनि प्रयोग गरिराखेकी हुन्छु । मोबाइलमा गेम पनि खेलिराखेकी हुन्छु । रिल्याक्स गर्ने टाइममा गेम खेल्छु । अफिसमा पनि टाइम ब्रेकमा वा लन्च ब्रेकमा गेम खेलिराखेकी हुन्छु । प्रायःजसो माइन्ड गेम खेल्छु । मैले धेरै खेल्ने गेम ‘२०६८’ हो ।
‘दिल से’ एकदमै मन परेको फिल्म हो मलाई । ‘जिन्दगी नामिले दोबारा’ पनि त्यस्तै मन परेको फिल्म हो । हलिउडमा पनि मन पर्ने फिल्म धेरै छन् । तीमध्ये ‘द एज अफ याडलार्यन’ र ‘मिट ज्वोय ब्ल्याक’ दुई फिल्म हुन् । प्रायः पुट लकरमा फिल्म हेर्छु ।
घरमा सामसुङको टीभी छ । तर, म प्रायः हेर्दिनँ ।
मलाई बलिउड फिल्म मन पर्छ । हलिउड पनि केही मन पर्छ । फिल्म हेर्न प्रायः थिएटरमा जान्छु । छोराहरू वा अफिसका साथीहरूसँग पनि फिल्म हेर्न गइराखेकी हुन्छु ।
कहिलेकाहीँ तनाव भयो भने एक्लै हल गएर टिकेट किनेर पनि फिल्म हेर्छु ।
स्टार स्टकखालको मान्छे होइन म । एक्टिङबाहेक एउटा मानिसका रूपमा सलमान खानलाई मन पर्छ । किनकि मानवीय पक्ष पनि छ उसमा । अलिकति ब्याड ब्वाई । त्यो पनि छ उसमा ।
तर, उसले आफ्नो जे स्टारडम बनाएको छ त्यसबाहेक आफूभन्दा तल्लो तहका मानिसलाई सहयोग गर्ने साथै ‘इन्टरप्रेनरसिप’ पनि गरेको छ उसले । उसको त्यो पाटोलाई म कदर गर्छु ।
मेरो शरीरमा त्यस्तो केही समस्या छैन । ‘आई एम अ भेरी फिट पर्सन’ । प्रेसर, सुगर त्यस्तो केही समस्या छैन । ‘नथिङ’ ।
राजनीतिमा संलग्न हुन पनि मलाई प्रस्ताव आएका छन् । अहिलेसम्म गएको छैन । कहाँबाट प्रस्ताव आए त्यसबारे खुलाउन चाहन्न । म एउटा ब्यांकर हो । आर्थिक सेवा दिन बसेको यसमै खुसी छु ।
मैले राजनीतिशास्त्र पढेको पनि हो । यसमा चासो पनि छ । तर, मेरो अपिनियन आफैँसँग राख्छु । मेरो आफ्नो हिसाबले नागरिकका रूपमा केही कुरा राख्नुपर्यो भने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू सबैसँग आफ्नो धारणा राखिराखेकी हुन्छु ।
विश्व इतिहासमा हेर्ने हो भने मार्टिन लुथर किङ एकदमै राम्रो नेता हुनुहुन्थ्यो । मलाई मन पर्छ । अहिले त्यस्तो मन छाएको नेता कोही छैनन् । मनै खाएको कोही छैनन् ।
मतदान गरिराखेकी छु । जसलाई मतदान दिएँ, त्यो आफैँसँग राख्छु् । सबैलाई भन्न जरुरी छैन । तर, प्रजातन्त्रलाई समर्थन गर्छु । आधुनिक युगमा यो हुनुपर्छ । यो शासन व्यवस्था बुझ्छु र यसलाई मान्छु पनि ।
हो, केही जिम्मेवारी ग्रहण गरेर पोलिसी मेकिङ लेभलमा बसेर काम गर्दा केही परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । म अहिले एउटा ब्यांकरका रूपमा ठीक छु ।
म सोसल ड्रिंकर हो । ड्रिंक नै नगर्ने होइन र रक्सी नभई नहुने पनि होइन ।
वर्षौंसम्म नपिएर पनि बस्न सक्छु । पिएँ भने ह्वीस्की मन पर्छ । झन्डै एक वर्षअघिको भाइटीकामा दाइभाउजूसँग पिएकी थिएँ । त्यसपछि पिएकी छैन ।
संगीतप्रेमी हो म । सामान्यतः सबै समय गीत–संगीत सुनिरहन्छु । अफिसमा पनि म गीत–संगीत सुनिरहन्छु । बलिउड म्युजिक मन पर्छ मलाई ।
यसबाहेक म गाउँछु पनि । मेरो जेठो छोराले पनि गाउन थालेको छ । हामी प्रायः सँगै गाइराखेका हुन्छौँ । पाइला–पाइलाको संगीतको कुरा गर्ने हो भने हार्ड रक पनि मन पथ्र्यो । सफ्ट रक पनि मन पर्छ ।
लेटेस्ट ट्रान्स म्युजिक एकदमै मन पर्छ । मेरो मुडअनुसार कस्तो संगीत सुन्ने त्यसको निर्धारण हुन्छ । कन्ट्री म्युजिक, ज्याज, सुफी, कवालिज, कोक स्टुडियोका गीत । सबै किसिमका संगीत आफ्नो समयको अनुकूलताअनुसार सुनिरहन्छु ।
अफिसमा बस्दा लाइट म्युजिक सुनिरहन्छु । भाषा बुझे पनि नबुझे पनि विदेशी संगीत पनि सुन्छु म । जस्तै, स्प्यानिस, फ्रेन्च गीत पनि सुन्छु ।
मैले दुई च्यारिटी फङ्सनमा गीत गाएर बेस्ट सिंगरको अवार्ड पनि पाएकी छु । त्यसमध्ये एउटा नारायण गोपालको गीत गाएकी थिएँ, ‘केही मीठो बात गर’ । अर्कोचाहिँ हिन्दी गीत गाएकी थिएँ । संगीतमा म निकै आनन्द लिन्छु ।
भूल अहिलेसम्म केही गरेको छैन । जे गर्नुपर्ने थियो त्यो गरेँ । त्यसबेलाको मेरो दिमागले गर्नुपर्छ भन्ने सोचेर गरेको थियो । त्यो भूल नै होइन ।
जीवन आफैँमा एउटा सिकाइ हो । भूल हुँदैन । जे गर्नुपर्ने थियो त्यो भयो । जो भोग्नुपर्ने थियो भोगियो । र, त्यसबाट सिकियो । त्यसबाट हामी झन् राम्रो मान्छे बन्न सक्छौँ । ला भनेर जिब्रो टोक्नुपर्ने केही छैन मेरो जीवनमा । भूल केही पनि गरेको छैन ।
म पहिलेदेखि नै विद्रोही स्वभावको थिएँ । नियममाथि प्रश्न गर्थें । सानो छँदा धेरै खराब पनि थिएँ । तर, सधैँ शिक्षकले मन पराउनुहुन्थ्यो । कतै अन्याय भइराखेको छ वा चित्त बुझेको छैन भने प्रश्न गरिहाल्थेँ । जे गरेँ सबै कुरालाई सकारात्मक हेर्न चाहन्छु । भूलका रूपमा होइन । चिन्ता लिनेखालको मान्छे नै होइन म ।
मेरा व्यक्तिगत कुरा सार्वजनिक गरिराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन । आग्रामा गएर ११ रुपैयाँमा केही किनौँ वा कतै गएर ‘गोल्ड प्लेटेड’ चम्चा नै किनौँ त्यो मेरो आफ्नो चीज हो । त्यसलाई पब्लिक बनाउन जरुरी छैन । तर मलाई एस्थेटिक्स भन्ने मन पर्छ ।
मेरो घर राम्रो छ । मलाई मन पर्छ । ललितपुरको पाटनमा आठ वर्षअघि बनाएकी थिएँ । यसमा कति खर्च लाग्यो भन्ने भन्न जरुरी छैन ।
मेरो अफिसमा तपाईंले हेर्नुभयो भने पनि त्यो देख्नुहुनेछ । आफूलाई मनपर्ने फूल, मूर्ति वा पुतली डेकुरेट गर्छु ।
मेरो राशि धनु होे । ग्रहदशा, ग्रहशान्ति केही पनि हेर्दिन/गर्दिनँ । मलाई लाग्छ– आफ्नो संकल्प आफैँ तय गर्छु । म यिनै कुरामा झुमेर बसिरहन्छु भने मैले पढेको यो सबै कुरा
केका लागि त ?
विश्वास गर्छु तर त्यसमै झुन्डिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन । यो दिनमा कपाल काट्नुहुँदैन । नुहाउनुहुँदैन । यी सबै धार्मिक नीति नियम मैले अध्ययन नगरीकन विश्वास गर्दिनँ । पहिले सही हो कि गलत त्यो पढ्छु ।
व्रत बस्ने गर्छु । तर, अचेल त्यस्तो केही गर्दिनँ । म धार्मिक मान्छे होइन, आध्यात्मिक मान्छे हो । धर्म र अध्यात्म फरक कुरा हुन् ।
हरेक धर्म मान्छु म । मेरो नागरिकतामा हिन्दु भनिएको छ । तर, मेरो बुद्धिस्ट गुरु पनि हुनुहुन्छ । अहिले कुरान पढिरहेकी छु । सबै धर्मका बाटो एउटै हुन् ।
म ठिकै छु जस्तो लाग्छ । मान्छेहरू मेरो अनुहार देखेर तर्सिन्छन्जस्तो लाग्दैन । मन लाग्यो भने पूरा मेकअप गरेर बस्छु । मन लागेन भने केही पनि गर्दिनँ । आजजस्तै । केही पनि गरेको छैन ।
तेल, पर्फ्युम, क्रिम लगाउँछु म । आफ्नो केयर गर्नुपर्छ । म आमा भएर छोरालाई माया गर्छु भने पहिले आफैँलाई माया गर्नुपर्छ । नियमित रूपमा मसाज गर्न पनि जान्छु । मसाज गर्न प्रायः एउटै ठाउँमा जान्छु ।
जीवनमा विभिन्न किसिमका प्रेम हुन्छन् । यहाँले भन्न खोज्नुभएको रोम्यान्टिक लभ होला । यत्रो उमेर जिइसकेपछि विपरीत लिंगप्रति कहिल्यै आकर्षण नहुनु भन्ने त झुट बोलिराखेको हुन्छ । निश्चय पनि, भएको छ । यत्रो उमेरमा कसैलाई मायाँ नगर्नु, लभ नै नगर्नु भन्ने त हुँदैन ।
यस विषयमा मसँग राम्रो सम्झना छ । तर, यसबारे धेरै सार्वजनिक गर्न चाहन्न म ।
तपाईंले युट्युभमा खोज्नुभयो भने भ्यालेन्टाइनबारे मैले बोलेको भेट्न सक्नुहुन्छ । त्यतिमात्रै सार्वजनिक गर्छु । मेरो अनुभव सबै भन्न आवश्यक छैन ।
‘एस, अफकोर्स,’ लभ परेको छ रवीनाको ? धेरैपटक परेको छ ? हो । त्यही हो ।
म सिंगल मदर हो अहिले । १७ वर्षमा विवाहित थिएँ म । सात वर्ष भइसक्यो म एक्लै बस्छु । मेरो साथमा दुई छोरा छन् ।
कुनै बिन्दुमा गएर आफ्नो जीवन कसैको सहयोगमा समर्पण गर्नेछु । मैले हिलिङ प्रोसेसमा क्वालिफिकेसन्स लिएको छु । त्यो चीजमा लाग्छु भन्ने पनि लाग्छ मलाई । अहिले पनि कतै गएर मोटिभेसनल टक्स दिइराखेकी हुन्छु ।
आफ्नो अनु्भव त्यतिबेला व्यक्त गर्नेछु सायद । यदि कसैलाई मद्दत गरिँदै छ भने त्यहाँ आफैँलाई पनि मद्दत गरिएको हुन्छ । जीवनको सन्तुष्टि भनेकै त्यही हो । सद्दाम हुसेन, राजारानी, संसारका धनी मानिस । मरेर जाँदा केही लिएर जाँदैनन् ।
मानव जाति हो म । जीवनका हरेक सुविधा ग्रहण गर्न चाहन्छु । तर, ती कुरासँग झुन्डिएर बस्न चाहन्न । त्यो मेरो जिन्दगीको उद्देश्य पनि होइन ।
मानिसलाई मैले महँगो आइफोन पनि दिएकी छु । कसैलाई मन पर्यो भनेर सुन, गहना पनि दिएकी छु । जीवनका अन्तिम दिनहरूमा सायद एउटा राम्रो हिलर हुन्छु होला । कुनै बिन्दुमा योगा गुरु पनि बन्न मन छ । त्यो पनि बन्छु । सायद किताब लेख्नेछु । मरेर जाँदा, जब रवीना रहँदैन मेरो छोरा र साथीहरूले मात्रै सम्झिनुबाहेक फराकिलो जमातले सम्झियोस् । केही प्रभाव पर्ने काम गरेर रवीना आफ्नो प्राण छाडेर गइन् भन्ने होस् । यही मेरो सपना हो ।